Positano waa tuulo cliffside on koonfurta Italy ee Amalfi Coast. Sida laga soo xigtay halyeeygii hore ee abuuray by Neptune, Ilaahii badda oo ka maqnaa jeclahay qanjiro. Its Dedieu dhagax dixeed iyo yacday, jidadka cidhiidhi ah iyo jiidh leh dukaamada iyo makhaayadaha waa waxa caan ku tahay. waa in adiga iyo saygaada aad booqato Chiesa di Santa Maria xayaawankan soo bandhigtay 13-qarnigii icon ah Byzantine of Mary Virgin ah.
Like riyooday riyo, Positano waa meel ku fiican si ay ugu dabaal isagoo jacayl! Waxaa jira waxyaabo badan oo loo sameeyo; aad tahay hubi inaad haysato a safarka ee Meyeydaan.
Markay tahay helitaanka meelahaaga ugu fiican ee gaadhaayada qaxwada ee Europe, Hvar, Croatia inta badan waa liiska lamaanaha! Daanka-ka tagtey quruxda dabiiciga ah, magaalooyin darbi jiif ah, iyo buluugga aan dhammaadka lahayn ee Adriatic: Croatia waa xulasho layaableh oo loogu tala galay bisha-malab-gaaban ama jaceyl yar oo jaceyl ah. Iyada oo fara badan qorraxda, canab ah, iyo fursadaha makhaayad, waad jeclaan doontaa goortaad qaan-garowga qaaradda Yurub ka tahay halkaan cajiibka ah.
Magaaladan yar ee darbiga leh oo ay ka buuxaan naqshadaha Gothic-ku waa taam ku habboon lammaanaha raadinaya vibes dabacsan leh taariikh yar iyo indha indheyn maalintii. Iyada oo u dhoofaysa waa mid ka mid ah hababka ugu fiican ee si aad u aragto Croatia guud ahaan-iyo aynu u wajihi, sidoo kale hab wanaagsan oo lagu soo maro a Malabkajaceylka bishan, Uber ayaa si rasmi degay gobolka, laakiinse hubaal jidka ha laga yaabaa in aad u malaynayso in.
Switzerland Waxaa laga yaabaa inaysan aheyn meesha ugu horeysa ee maskaxda lagu soo dhigo markii aad ka fikirtid meelaha qafaalashada Honeymoon ee Yurub, laakiin waxa ay xaqiiqdii waa Dayda. In kastoo yar oo qaraabo size in dalalka badan oo Yurub, Switzerland leeyahay muuqaal dabiici fiican. tuulooyinka picturesque, magaalo casri ah, hidaha iyo dhaqanka, iyo jawi qurux badan oo loogu talagalay bisha Malabka haddii aad booqato xilliga qaboobaha, guga, xagaaga, ama dhici.
Waa in aad soo booqato The amphitheaters Roman! Waxay waxaa loo yaqaan dunida oo dhan ay waynaanta iyo fiiro gaar ah u faahfaahsan. tiyaatarada madhan yihiin si ay u eeg. Goorma ayay bilaabmaysaa dhawaaqa bandhigyada fanaaniinta opera ugu fiican, waayo-aragnimo ah waa adag tahay in lagu qeexo.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit leh link si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhoneymoon-destinations-europe%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)